ပန်ဒိုရာ: Happy Halloween!
အားငယ်ပါတယ်ဆိုမှ သူများကို ညကြီး မင်းကြီး ကြောက်အောင်လုပ်ပြန်ပြီ... :-P
ပြီးတော့ သူများဝယ်ထားတဲ့ ရွှေဖရုံသီး ပုံထဲ ထည့်ဆွဲဖို့ လာယူသွားတော့ ဟင်းဘယ်လို ချက်စားရတော့မလဲ... :-(
ရောက်တယ် အမ ပန်ဒိုရာ
Lovely banner.I like banner the most.
About your status, it's good news for you and your family?
If so, congratulation ma ma pan. Unless sorry for misunderstanding :D
chit chit (laypyay)
Hello, Chit Chit. Not mine yet. :)
လင်းနို့ပုံကို မောက်စ်နဲ့ဆွဲတာပဲလား အ၇မ်းကြိုက်တယ် ကျနော်ဆွဲကြည့်တာ လှဘူးး)
ဘန်နာလေးလည်းလှတယ်.. မပန် ပုံဆွဲတာ အရမ်းတော်တယ်.. mouse နဲ့ဆွဲတာတောင် ဒီလောက် ကောင်းနေတာ.. :)
အဟီး.. status ဖတ်လိုက်တော့ စိတ်ထဲက“ဟယ်”လို့တောင် အော်မိသေးတယ်.. :D commentတွေ ဖတ်လိုက်တော့မှပဲ... :)
ကြောက်ဖို့ မကောင်းဘဲ ချစ်ဖို့ကောင်းနေတယ် မပန် =)
ကိုယ့်ဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ဗာတီကန် ကက်သလစ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကလဲ ခရစ်ယန် နဲ့ လားလားမှမပတ်သတ်ဘူးတဲ့ Telegraph news မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ် ဘယ်သူ့ဟာလဲသိဘူး
ကြောက်စရာ မကောင်းပါဘူး။ ပုံလေးကို ကြိုက်လို့ ယူသွားပြီ။
လက်ရာမြောက်လိုက်တာ… ဒါပေမယ့် ကြောက်တယ်… သားက ဖရုံသီးကြီးပူဆာနေတာတောင် အ၀င်မတော်မှာကြောက်လို့ဝယ်ပေးဘူး…